Gufgaf|Online प्रदीपले छोडेपछि ‘ए मेरो हजुर ३’ मा आएका थिए अनमोल !
प्रदीपले छोडेपछि ‘ए मेरो हजुर ३’ मा आएका थिए अनमोल !
गफगाफ - अभिनेता प्रदीप खड्का यतिबेला सिनेमा चैत २२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने सिनेमा ‘लभ स्टेशन’ को प्रमोशनमा व्यस्त छन् । उनी सिनेमाको प्रचारको लागि विभिन्न कलेज र स्कुलहरु सँगै टेलिभिजन र रेडियोमा पुगिरहेका छन् । सिनेमाको सक्दो जानकारी दर्शकमाझ पुर्याउने कोशिषमा रहेका प्रदीपले यस सिनेमाको प्रचारको क्रममा एउटा खुलाशा गरेका छन् ।
प्रदीपले यहि चैत्र २९ गतदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको सिनेमा ‘ए मेरो हजुर ३’ छोडेका थिए । अनमोल केसीको मुख्य भूमिका रहेका कारण ‘ए मेरो हजुर ३’ प्रतिक्षित सिनेमा बनेको छ । तर यो सिनेमामा प्रदीपले काम नगरेपछि मात्रै अनमोलले काम गर्न पाएका थिए ।
खासमा प्रदीप र अनमोललाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धीको रुपमा पनि हेरिन्छ । यहि कारण केही समय अघि सिनेमा ब्याचलर बन्टी अनमोल केसीले छोडेपछि प्रदीप खड्काले साईन गरे भन्ने हल्ला चल्यो । यो कुरा हल्लामा मात्रै सिमित रहेन सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ट्रोल नै बन्यो ।
हालै मात्र फर्सिनेटवर्ककको सामाजिक सञ्जाल र ट्रोलसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा प्रदीपको उक्त ट्रोलको प्रसंग पनि जोडियो । जुन ट्रोलमा अनमोलले छाडेको सिनेमा प्रदीपले साईन गरेको कुरा उल्लेख छ । तर प्रदीपले उक्त ट्रोलमा चित्त दुखाउँदै यसरी एउटाले छोडेको सिनेमा अर्काले गर्नै नहुने भन्ने नभएको बताए ।
उनले अनमोलले पनि आफूले छोडेको सिनेमामा काम गरेका बताए । ‘ए मेरो हजुर ३’ को निर्माण पक्षले यस सिनेमाको लागि पहिलो प्रस्ताव प्रदीपलाई राखेको थियो । प्रदीपले यो सिनेमा गर्ने लगभग फाईनल भईसकेको थियो । तर सिनेमा ‘लभ स्टेशन’ को काम र ‘ए मेरो हजुर ३’ को काम जुध्ने भएका कारण प्रदीपले सिनेमा छोडेका थिए । आफूले छाडेपछि अनमोलले ‘ए मेरो हजुर ३’ मा प्रवेश गरेको प्रदीपले बताएका छन् ।